मोडलिङ कस्तो हो भन्ने कुरा हेर्ने नजरमा भर पर्छः मोडल मोनिका बुढाथोकी | Artist Khabar
मोडलिङ कस्तो हो भन्ने कुरा हेर्ने नजरमा भर पर्छः मोडल मोनिका बुढाथोकी	पुस, काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने धेरै नयाँ मोडलहरु आफ्नो करियर बनाउन यसक्षेत्रमा लागेका धेरै भेटिन्छन । तर करियरको लागि यसक्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपनि यसक्षेत्रमा भविष्य छैन भन्दै मोडलिङ् क्षेत्रको सपना पनि देख्न छाडिसकेका छन् धेरैले । तर यति बेला मोडलिङ क्षेत्र छोड्नेको संख्या भन्दा पनि भित्रिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । यस्तै भिडकी एकजना मोडल यस क्षेत्रमा करियर खोज्दै भित्रिएकी छन् । ती मोडल हुन् ‘मनिका बुढाथोकी ।
काठमाडौंको कपनकी बासिन्दा मनिका ड्रिम्स अनलिमिटेड नामको एक संस्था मार्फत प्रशिक्षण लिएर मोडलिङ क्षेत्रमा प्रबेश गरेकी हन् । उनले यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै धेरै मोडलिङ सम्बन्धी काम गरिरहेकी छिन् । विभिन्न सांगितिक कार्यक्रममा नृत्य तथा ¥याम्प समेत गर्दै आएकी उनी छ्टिटै म्युजीक भिडीयोमा समेत देखिने भएकी छिन् ।
भविष्यमा राम्रो कलाकार बन्ने सोचाइमा रहेकी मोनिका सानैदेखि अभिनयको सौख चढेको बताउछिन् । राम्रो फिल्मको अफर आयो भने अभियन गर्ने पछि नपर्ने बताउने उनले अभियन प्रशिक्षण समेत लिएकी छन् । सानैदेखि नाच्न तथा अभिनयमा रुचाउने मोनिका सम्भावनायुक्त कलाकार हुन् । विज्ञान विषयकी अध्ययन र सामाजिक सेवामा समर्पित उनै मोडल मोनिका बुढाथोकीसंग गरिएको छोटो कुराकानी ।।
पछिल्लो समय के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले स्ष्टेज प्रोग्राम तथा ¥याम्पमा ।
नृत्य अभियनबाहेक अन्य रुचिको क्षेत्र ?
लेखन र अध्ययनमा रुचि छ । कहिलेकाही गुनगुनाउछु पनि ।
लेखनमा कस्तो विषयले प्राथमिकता पाउँछन् ?
रोमान्टिक विषयमा लेख्नै सक्दिन । ट्राजेडीका विषयमा लेख्न मन लाग्छ ।
प्रेममा धोका पाएर ट्राजेडी फुरेको हो ?
त्यस्तो होइन, प्रेम गर्ने असल मान्छे भेटेकै छैन । सानै छु वेला हुदै छ होला ।
उसोभए अहिले सिङ्गल ?
एकदम, कम्प्लिट सिङ्गल छु ।
सामाजिक सञ्जाल कुन, कुन कत्तिको चलाउनुहुन्छ ?
फेसबुक , टुईटर, प्राय चलाउछु ।
साथी बन्ने प्रस्ताव कतिको आउँछ ?
धेरै आउछन् ।
प्रेम प्रस्ताव कतिको आउँछन् ? धेरै नै आउँछ । तर, मलाई चाहिँ आजसम्म कोही मन परेको छैन ‘आइ लभ यु टू’ भन्नको लागि ।
करिअर कसरी सुरु भयो ? ड्रिम्स अनलिमिटेडमा तालिम लिए । फोटो सुट गरे । त्यसपछी
यो पेशामा आउन परिवारको कत्ति सहयोग छ ? परिवारको सहयोग र सहमतिमा नै म यो क्षेत्रमा छु । ममी र बाबाले मेरो काममा प्रोत्साहन गररहनुभएको छ ।
हाम्रो समाजमा ‍¥याम्प मोडलको खासै प्रशंशा गर्ने गरेको सुनिदैंन नि ?
हो । यस्तो देख्दा केही खल्लो पनि लाग्छ । तर, यो सबै हेर्ने नजरमा भर पर्छ । विस्तारै सुधार हुँदैं गएको जस्तो लाग्छ ।
दाम नै नभए पनि किन यो क्षेत्रमा युवाको आकर्षण नि ? अहिले जसलाई पनि यो क्षेत्रले लोभ्याएको छ । गरौं न, हेरौं न भन्ने उत्सुकताले होला ।
म्युजिक भिडियो र चलचित्रमा खेल्ने रुची छ कि छैन ? मलाई म्युजिक भिडियो भन्दा राम्रो अफर आयो भने चलचित्र गर्ने इच्छा छ । हेरौं के हुन्छ ।
के चढ्नु हुन्छ ? गाडी, स्कुटी वा सार्वजानिक सवारी ?
धेरैजसो सार्वजानिक सवारीमा यात्रा गर्छु ।
तपाई कतै बजारमा जाँदा सबैभन्दा मनपर्ने लुगा तपाईको कुन हुन्छ ?
वन पिस र साडी ।
अन्ततः तपाईलाई १० बर्षपछि कहाँ कस्तो अवस्थामा देख्न पाइने छ ?
एउटा राम्रो कलाकार भएको यही नेपाली कला क्षेत्रमै ।
केही भन्न चाहनु हुन्छ दर्शक तथा पाठकलाई ?
म मेहनत गर्छु, मैले गरेको हरेक कामहरुलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला, त्यही अनुसार अघि बढ्छु ।
तस्बिरः शिबलाल श्रेष्ठ
अरु समाचारहरु पुरानै कलाकारहरुको प्रेरणाबाट आएका हौं हामी: नवगायक भरत परियार नवलपरासीका कृष्ण सुवेदीको आत्महत्याको छानविन गर्न ‘छक्का पञ्जा’ टिमले दियो प्रहरीमा निवेदन संगीत बिन्दु नभेटिने अनन्त महासागर हो, जति डुब्यो त्यहि गहिरोः संगीतकार सनम तेरिया मगरले जितिन् कलर्स टिभिको ‘झलक दिखला जा’ उपाधि ‘लभ लभ लभ’मा समावेश अडियो गीत तथा भिडियो सार्वजनिक (भिडियो) आर्टिस्ट फस्टः पहिलो मोबाइल नोकिया ८३१० मोडल, पहिलो सवारीसाधन साईकलः हेमन्त शर्मा दिपकराज गिरी प्रतिको नकरात्मक टिकाटिप्पणीबारे कलाकार संघको प्रेस विज्ञप्ती गायक मिलन लामाले शुरु गरे उदाहरणीय कामः ‘बनको काफल बनकै चरीलाई’ म्युजीक भिडियोमा ब्यस्त निरेन चलचित्र निर्माण तिर आर्टिस्ट फस्टः पहिलो प्रेमप्रस्ताव कक्षा ५ मा, पहिलो कमाई ३५ सयः सुरजनी केसी म हराएको छैन, किन एकतर्फि समाचार आउँछन्ः सुबास कार्की ‘मंगलम’को सुरुवात यस्तो, शिल्पाले गदैछिन् निर्मात्रीमा डेब्यु प्रियंका चोपडाको नेपाली फिल्ममा खड्का जीकी कान्छी श्रीमती बनेकी मञ्जु छनोट नवलपरासीमा नेवि संघले ‘छक्का पन्जा’ टिमका सबै चलचित्र चल्न नदिने मोडलिङ बौद्धिकता र सौन्दर्यताको बिकास गराउने माध्यम हो: मोडल अनुष्का शर्मा यमबुद्धलाई आर्टिस्टहरुले सामाजिक सञ्जालमा यसरी सम्झिए चर्चित र्याप गायक यम बुद्धले गरे आत्महत्या ‘छक्का पन्जा’को पाइरेसी गरेको आरोप लागेका युवकले गरे सुसाईट नोट सहित आत्महत्या दिपिकाले गरीन् हलिउड चलचित्र ‘ट्रिपल एक्स’को प्रमोशन, गोल्डेन गाउनमा सेक्सी अवतार (३० तस्बिर) ‘छक्का पञ्जा’ पाईरेसीमा, फिल्म आयो युट्युबमा (फिल्म सहित) शंकर बिसि र पार्वती राईको नृत्यमा ‘सालघारीमा सिसौ’ (भिडियो) आफ्नी श्रीमतीको नग्न फोटो सेयर गरे यी नायकले प्रेमको कथामा सुर्य श्रेष्ठले ल्याए ‘चोखोमाया दिँदा पनि’ (भिडियो) जाडोमा लगाउने बुटको कथा, किन आर्टिस्टको रोजाईमा छ ‘बुट’ ? Recent Posts	पुरानै कलाकारहरुको प्रेरणाबाट आएका हौं हामी: नवगायक भरत परियार
नवलपरासीका कृष्ण सुवेदीको आत्महत्याको छानविन गर्न ‘छक्का पञ्जा’ टिमले दियो प्रहरीमा निवेदन
संगीत बिन्दु नभेटिने अनन्त महासागर हो, जति डुब्यो त्यहि गहिरोः संगीतकार सनम
तेरिया मगरले जितिन् कलर्स टिभिको ‘झलक दिखला जा’ उपाधि
‘लभ लभ लभ’मा समावेश अडियो गीत तथा भिडियो सार्वजनिक (भिडियो)